Sawirka Maanta: Qori quful & xayndaab loo yeelay ayaa nabaddi ku jirtaa – SBC
Sawirka Maanta: Qori quful & xayndaab loo yeelay ayaa nabaddi ku jirtaa
Qiimaha nabaddu u leedahay aadanaha ayaa ah mid macaankeeda la arko marka la waayo deganaansho iyo xasilooni iyadoo qaraarka nabad la’aanta la dhadhamiyo marka sharci iyo nidaam la’aantu gaarto heerka ugu sareeya oo la waayo meel loo ciilriisdado.
Hubka oo gacanta u gala shacabka waa tan ugu daran ee nabad la’aanta horseeda markaasi oo la waayo hab lagu xakameeyo falalka amni darada oo noqda tusbax afka laga furey qaanuunkana la hareer maro wax kasta oo nidaam ahna lagu dul socdo.
Sawirka maanta aan idin soo xulnay wuxuu ka turjumayaa muhiimada ay leedahay in la xakameeyo hubka sida qoryaha ee gacanta ugu jira dad badan oo Soomaali ah kaasi oo mashaqo iyo mushkilad ku haya amaanka qof kasta.
Waa su’aalo la iswaydiin karo, maxaadse adigu ku cabiri laheyd oo fikirkaaga ah (Have your say) hoos comment-ga ku soo qor waxa ay kula tahay aragtidaada sida ugu haboon ee dalka Sooomaaliya nabad loogu soo dabaali lahaa, qof kastana uu kaalintiisa uga qaadan lahaa dib u soo celinta amaanka iyo nabadda, adigoo kacabir qaadanaya sawirkan qoriga qufulka loo sameeyey ee la xakameeyey.
ASC Somaliya waxaa dhibaatada u keeney waa qori iyo qaad waxaana labadaas lagu joojin kara ayadooloo laabto kitaabka alle swt. Midda kale waxaaa dhibaato kale ku ah Somaliya waa gobolaysiga oo hadda noqday caqabad kale waxaana ka danbeeya waa dawlado gumaysi laraba wadanka waxaana u adeegaya dad la yaqaan, kuwaas oo aan layska qabana somaliya degi mayso sc.
mudane gashka says:
ASC Salaan ka dib somali haddi ay caqligu shaqeeyo waxa dhibta keenay waa qoriga lakiin qorga isma qaado ee qof ayaa qata marka dadku hadi ay fahman nolosha dhabta ah waa amaan qof walba oo dunida ku nool waxa u jecelyahay in uu nabad ku noolaado marka waa wax lagu farxo hadi aan maanta garanay saas somaliyey
maxamed aadan faarax bulay says:
walaal aniga ila ma ahan in qori qafil loo sameeyey nabad lagu gaari karo walaal nabad waxaa lagu gaari karaa soomaaliya oo wada tashada iskuna wada yimaada meelna la dhigo waxa qabiila oo dhan ka dibna walaalooba marka kadib ayey nabadu dhalanaysaa ama kala danbeen iyo midno
asc waxaan isleeyahay hadii dadka kujira argagaxisada oosomalida ah lagasaaro waxaan abaa in wax isbadali lahaayeen laakin inta raga laleeyahay alasooqabto, qorina uuhaysto nabad hasugin